Prof. Mary Abukutsa-Onyanko oo ka tirsan daabacaadda iyo sugnaanta cuntada ee OA - AfricArXiv
Published by Jo Havemann on 19th Diisembar 2019 19th Diisembar 2019
Horraantii Disembar 2019, Prof Abukutsu-Onyanko wuxuu shaqadeeda ku soo bandhigay UTC-SPARC Africa Kulan Cilmiyeed Furan 2019 Dood-cilmiyeed ka dhacay Cape Town, Koonfur Afrika.
Mid ka mid ah cilmi-baareyaasha ugu caansan Afrika, Professor Mary Abukutsa-Onyango waxay la wadaagi doontaa waaya-aragnimadeeda muujineysa in marin u helidda macluumaadka ay muhiim u tahay horumarka. # OASymp2019 #SPARC #SPARCAfrica # furitaanka #qarsoodi #Libsense #wacren #qasriga pic.twitter.com/NzCgyKwYKW
- UCT-SPARC Afrika (@SPARCAfrica) November 22, 2019
Ka daawo soo bandhigida Zenodo:
Qiyaastii toban sano ka hor, Leslie Chan waraystay Prof. Mary Abukutsa ku saabsan shaqadeeda saynisyahano xagga Beeraha ee Sugnaanta Cuntada iyo Khudaarta asaliga ah ee Afrikaanka ah.
Furan Journals waa lama huraan. Aad ayey muhiim ugu yihiin waqtigan xaadirka ah. […] Markaan baaritaanka sameyneyno, micno malahan haddii aad ku keydiso miiska hoostiisa ama qolka armaajada. Waxaan u baahanahay inaan wadaagno macluumaadka, cilmi baarista aan sameeyno - haba yaraadee intaba - ilaa inta ay saameyn ku yeelan karto horumarka, hab-nololeedka dadyowga iyo habka fikirka dadyowga.
Categories:	Furan FuranIsgaarsiinta Sayniska
Tags: Khudaarta asaliga ah ee Afrikaanka ahAmmaanka CuntadaJournals Furan
24-kii Noofambar, 2020 Xiriirka Meelaha Furan ee Furan (COAR) wuxuu daabacay jawaab ku saabsan Shuruudaha Xulitaanka Keydinta Macluumaadka, iyagoo la wadaagaya welwelka ay qabaan iyo sababta ay shuruudahan caqabad ugu noqon doonaan cilmi-baarayaasha qaarkood. Akhri wax dheeraad ah…
In ka badan laba sano oo aan la shaqeyneynay AfricArXiv waxaan ku faraxsanahay inaan soo bandhigno aragti guud oo ku saabsan shaqadeena. Waxaad faahfaahin dheeraad ah iyo macluumaad ka heli kartaa Cite sida: Ahinon, JS, Ksibi, N., Havemann, J. Akhri wax dheeraad ah…
ut nec consequat. mattis ut libero venenatis ultricies